पहिरोले परिवारै उजाड्यो - Purbeli News
Trending # राशिफल275# मृत्यु196# पक्राउ145# मृत्यु125# पक्राउ60# नेकपा58# एनसेल49# केपी शर्मा ओली47
पहिरोले परिवारै उजाड्यो
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आषाढ ३०, २०७७ समय: ६:५०:४०
दमौली । तनहुँको ऋषिङ–८ भैंसीकिलेका आनबहादुर र उनका भाइ हरिकुमार थापाको संयुक्त परिवार थियो। नछुट्टिई बसेको उनीहरूको परिवारलाई आइतबार मध्यरात पहिरोले उजाड पारिदिएको छ। एकै परिवारका पाँच जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
आनबहादुरका साहिला छोरा भेषबहादुर, बुहारी नानीमाया, अर्की बुहारी मनिसरालाई पहिरोले खोसेको छ। मनिसरा तीन महिनाकी गर्भवती थिइन्। भेषबहादुरकी छोरी अमिषासँगै आनबहादुरका अर्का छोरा महादेवको पनि ज्यान गएको छ।
अघिल्लो दिनदेखि पानी अविच्छिन्न परिरहेको थियो। दुई परिवार सँगै भए पनि आनबहादुरका छोराबुहारी छेउको घरमा बस्थे। खाना सँगै खाने उनीहरू आइतबार राति अबेरसम्म एकसाथ थिए। ‘पानी परेको पर्‍यै छ, कति खेर के हुने हो ? ’, भेषबहादुरको बोली सम्झिँदै काका हरिकुमारले भने, ‘आज बरु सँगै बसौं।’
केही समयअघि घरनजिकै ढिस्को खसेकाले घनघोर वर्षा हुँदा भेषबहादुरलाई चिन्ता परेको रहेछ ! ‘आज सँगै बस्नुपर्छ के हो’, भेषबहादुरले यसो भने पनि परिवारले गम्भीरतापूर्वक लिएन। ‘ऊ सधैं ठट्टा गथ्र्यो’, हरिकुमारले भने, ‘हामी दाजुभाइ एउटै घरमा बस्ने भएकाले सँगै भए पनि उनीहरू खाना खाएपछि गए।’
सुत्न जानुअघि भेषबहादुरले कोरोनासँग लड्ने भन्दै प्रतिरोध क्षमता बढाउने औषधि बाँडेका थिए। ‘बेलुका सबैले सँगै खाइयो’, भेषबहादुरको भनाइ उद्धृत गर्दै हरिकुमारले भने, ‘भोलि बाँचियो भने सबैले सँगै खाउँला।’ भेषबहादुरले सधैंझैं ठट्टा गरेका होलान् भन्ने लाग्यो अरूलाई। तर, यसो भनेर गएको केही घण्टामै सधैंका लागि विलीन भए।
हरिकुमार र आनबहादुर बसेको घरमा पनि पहिरो खस्यो। तर, सँगै भएकाले उनीहरूले हत्तपत्त ज्योतिमायालाई उद्धार गर्न भ्याए। ‘भाउजूलाई त सँगै भएकाले जोगाउन सक्यौं’, हरिकुमारले ग्लानि भावमा भने, ‘उसले (भेषबहादुर) भनेझैं सँगै बसेको भए सबै बाँचिन्थ्यो कि !’
मध्यरातमा भएको घटनापछि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीसँगै स्थानीय उद्धारमा खटिएका थिए। गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले मानिसले मात्र नसकेकाले जेसीबी ल्याएर बेपत्ताको खोजी थालिएको बताएका थिए। गाउँपालिकाले पीडित परिवारलाई तत्काल १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। पवन पाैडेलले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
कोरोनाका कारण विराटनगरको कोशी अस्पतालमा थप एकको मृत्यु
जटिल अवस्थाका संक्रमितले उपचार नपाउने जोखिम
पर्सागढी नगरपालिकाका प्रमुखलाई काेराेना रहेकाे पुष्टि
सामाजिक सञ्‍जालले लेला ज्यान, साइबर अपराध ठूलो चुनौती
ओली–दाहाल छलफल समाधान उन्मुख, आजबाट काउन्टडाउन
कालीमाटी, कुलेश्वर र बल्खु क्षेत्रका ४० जनाभन्दा धेरै व्यापारीमा कोरोना
निजी अस्पताल भन्छन्–‘तोकिएकै शुल्कमा उपचार असम्भव’
आजको राशिफल / वि.सं. २०७७ श्रावण ३० (अगस्ट १४) गते शुक्रबार || श्री पाथीभरा माताले सबैको कल्याण गरुन
इटहरीमा दुई वटा शव फेला
न्यायाधीशमा कोरोना देखिएपछि बन्द भएको अदालत खुलेन
इटहरीकाे समुदायमा फैलिदै काेराेना, २ हजार बढि परिक्षण गर्दा ४६ मा संक्रमण
आजको राशिफल / २०७७ श्रावण २९ गते बिहीबार || बुढानिलकण्ठकाे कृपाले यहाँकाे दिन शुभ रहाेस्
बलात्कार पीडित भनिएकी महिलाका विरुद्ध गाउँलेले दिए उजुरी
एनआईसी एशिया बैंकको क्रेडिट कार्डबाट इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू खरिद गर्न सक्ने